Chimwe chezvinhu zvikuru zve Windows 10 ndiko kugona kwazvino kukwira mafaera eIO uye IMG muFaira Explorer nekungobaya-peta. Iyo yekushandisa sisitimu inogadzira iri chaiyo dhiraivha iyo inosimudza zvirimo mukati medhi dhisiki faira uye inoita kuti iwanikwe, chaizvo sekunge iwe waisa dhiziri yedhisiki mune yeanotyaira drive.
Iko kugona kukwirisa ISO mafaera muFaira Explorer kwakatanga kuunzwa mukati Windows 8. Yakanga iri imwe yeakanakisa kuvandudza iyo sisitimu yekushandisa yakagashirwa
ISO uye IMG mafaera akasarudzika emafaira emafaira emifananidzo ayo anogona kuchengeta zvirimo zvakatorwa muo optical disc kana diski inobviswa. Iyo diski yemufananidzo faira ikopi chaiyo yezviri mukati meimwe DVD kana CD midhiya. Izvo zvakare zvinokwanisika kugadzira iyo ISO mufananidzo faira nemaoko kubva kune chero mafaera aunayo pane chero dhiraivha, kana kushandura iyo ESD mufananidzo kune ISO.
Kukwira ISO uye IMG Mafaira mukati Windows 10, vhura File Explorer uye enda kufolda iyo inochengeta yako ISO faira.
Tinya kaviri faira racho kana kurudyi kuritepa uye sarudza “Gomo” kubva mumenu yemamiriro. Ndiwo wekumisikidza mamiriro menyu menyu.
Iyo diski mufananidzo ichaiswa mune chairo dhiraivha mune Iyi PC folda. Ona iyo skrini.
Dzimwe nguva, iyo faira yekudyidzana yeIO kana IMG mafaera anogona kutorwa pamusoro neyechitatu bato app. Semuenzaniso, yandinofarira archiver, 7-Zip inogona kuvhura ISO mafaera. Muchiitiko ichocho, iyo ISO faira inosanganisirwa ne7-Zip kana iwe uchimiseta seyakagadzika kubva kuDanho rePaneru. Kana ukadzvanywa kaviri, iyo ISO faira ichavhura mune inoenderana neapp.
Muchiitiko ichocho, iwe unogona kudzoreredza default faira kushamwaridzana, kana kukwira iyo faira kubva kune yemukati mamiriro.
Dzvanya-kurudyi iyo ISO faira uye sarudza Vhura ne - Windows Muongorori. Ona inotevera skrini:
Neimwe nzira, iwe unogona kudzoreredza default faira yekudyidzana. Zviite zvinotevera.
Enda kuSystem - Default maapplication. In Windows 10 Vagadziri Vandudza, enda kuApp - Default maapplication.
Ikoko, fura pasi pasi kurudyi pane pane iyi link "Sarudza default maapplication nefaira faira".
Pa peji rinotevera, tsvaga iyo ISO faira mhando.
Kurutivi rworudyi, tinya kusarudza Windows Explorer seyako nyowani default app. Izvi zvichadzorera default faira kushamwaridzana.
Cherechedza: Windows 10 inobvumira mushandisi kukwirisa ISO uye IMG mafaera ayo akachengetwa pane NTFS partition pane chishandiso chakabatana nePC yako. Mamwe mafaera faira nenzvimbo hazvitsigirwe. Semuenzaniso, kana iwe ukaedza kukwidza iyo ISO faira kubva kunetiweki share, inoratidza inotevera meseji:
Haikwanise Kukwira Faira
Ndine urombo, paita dambudziko pakusimudza faira.
Neimwe nzira, Windows 10 inokubvumira gomo ISO uye IMG mafaera uchishandisa PowerShell.
Vhura PowerShell uye nyora unotevera kuraira:
Iwe unogona kuteedzera iyo nzira kune iyo faira uye nekuinamatira muPowerShell koni. Ona iyo skrini pazasi.
Ukangopedza rako basa mukati meiyo yakamisikidzwa ISO mufananidzo, unogona kuibvisa.
Mune Faira Explorer, vhura Iyi PC uye sarudza "Bvisa" kubva mumenu yemamiriro eiyo chaiyo drive.
Neimwe nzira, muPowerShell, shandisa cmdlet Dismount-DiskImage seinotevera:
Ona chinyorwa chinotevera.
PowerShell Core 6.0 uye Nei Windows PowerShell Haisisiri Yakagadziriswa
kushandisa Windows PowerShell MaModule muPowerShell 7